Vantany vao manapa-kevitra ny hampiasa azy | Ota Bunkanomori
Rehefa mampiasa ny efitrano, efitrano misy tanjona, zoro efitrano fampirantiana, ary plaza
Amin'ny ankapobeny, ireto antontan-taratasy manaraka ireto, iray volana mialoha ny fanantenana hampiasana aorian'ny andro aorin'io, dia miangavy anao hanatrika fivoriana sy fivoriana ampy.
Tabilao fandaharana na fandrosoana, trakitra, tapakila fidirana na tapakila misy isa (ho ohatra iray)
Ho fanampin'ny voalaza etsy ambony, ny zava-nitranga tao amin'ny efitrano dia (XNUMX) sary fanomanana dingana, (XNUMX) sary fanomanana jiro, ary (XNUMX) sary fanomanana akustika.
(Raha ampidirina amin'ny orinasa ianao, azafady mba ampahafantaro anay ny anaran'ny mpandraharaha sy ny mombamomba ny fifandraisana.)
Rehefa mampiasa efitrano fivoriana, atrikasa famoronana na studio
Azafady mba ampahafantaro ny latabatra eo aloha ny momba ny firafitra anatiny sy ny toerana misy azy ireo farafahakeliny 2 andro alohan'ny andro fampiasana.
Arakaraka ny tiana hampiasaina dia azonao atao ny mangataka anao hanao fivoriana amin'ny mpiasa.
Raha ny fitsipika ankapobeny dia tsy azo amidy amin'ny trano fianarana sy toerana malalaka ny entana.
Fampiasana afo, sns. Fizarana fisorohana ny sampana mpamono afo ao Omori
1-32-8 Omorihigashi, Ota-ku, Tokyo Telefaona: 03-3766-0119
Fiarovana sns. Tobin'ny polisy Omori
1-1-16 Omorinaka, Ota-ku, Tokyo Telefaona: 03-3762-0110
Fikarakarana sakafo Toeram-pidiovana ara-pahasalamana ao amin'ny Ota Ward Health Center
1-12-1 Omorinishi, Ota-ku (rihana faha-6 amin'ny tranoben'ny governemanta Omori) Telefaona: 03-5764-0691
Ny fampahalalana momba ny hetsika dia azo apetraka maimaimpoana amin'ny magazine fampahalalana navoakan'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward sy ny tranonkala. (Arakaraka ny atiny dia hojerentsika mialoha.)
Amin'ny andro fampiasana, azafady mba asehoy ny taratasy fangatahana fankatoavana amin'ny fandraisana amin'ny rihana voalohany alohan'ny hampiasana ny efitrano.
Raha sendra voina dia miangavy anao mba handray ny fepetra rehetra amin'ny fitarihana fialana vonjy, fifandraisana vonjy taitra, ary fanampiana vonjy taitra ho an'ireo mpitsidika
Ento miaraka aminao ny fako rehefa mihinana na misotro ianao, na rehefa mampiasa azy io.Raha sarotra ny hitondra azy mody, dia hikarakara izany amin'ny sarany izahay, koa mba ampahafantaro anay.
Ny mpikarakara dia tompon'andraikitra amin'ny fandaminana sy ny fitarihana ny mpitsidika, ny fakana an-keriny ary ny fialamboly.Raha antenaina fa mpitsidika marobe no ho tonga alohan'ny fotoana fisokafana, na raha misy ny fisafotofotoana amin'ny fotoanan'ny hetsika dia andraikitry ny mpikarakara ny manendry mpikarakara ampy.
Miankina amin'ny hetsika, ny mpikarakara dia hanomana ny mpiasa amin'ny sehatra, jiro, feo sns.
Aza mihinana, misotro na mifoka raha tsy amin'ny faritra voatondro.
Ho an'ny fampiasana ny efitrano izay mety misy entana-enta-mitondra / ho entina, dia hanome anao tapakila fanadiovana parking maimaimpoana fotsiny izahay amin'ny andro fampiasana.Azafady mba anontanio ny mpiasa momba ny efitrano azo zaraina sy ny isan'ny fizarana.
Ny toeram-pijanonana dia manana fetran'ny haavony 2.8m sy fetran'ny 5m.Mariho fa.
Ho fanampin'izany, ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa efitrano hafa, ary ireo izay mihoatra ny isan'ny fizarana dia homena vola.
Azafady, midira avy eo amin'ny fidirana eo aloha amin'ny rihana voalohany tsy misy tohatra, ny tehezana amin'ny fidirana aoriana, na ny fijanonana eo amin'ny rihana voalohany.Ampiasao azafady ny ascenseur hahatratra ny efitrano tsirairay.
Ny trano fidiovana azo ampiasaina amin'ny seza misy kodiarana (kabine ho an'iza na iza) dia miorina amin'ny rihana tsirairay amin'ny trano fivoriana sy amin'ny efitrano (rihana voalohany, efitrano fisoloana akanjo).